Eziokwu Nkọwa na Ozi banyere Europe | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Ebe njegharị, Getaways Europe, General
Ochie ochie bụ ebe jupụtara n'akụkọ ihe mere eme, ebe enwere ọtụtụ ọdịbendị na-ejikọta ma na-ama ama ebe anyị niile tinyeworo na ndepụta anyị nke njem anyị ga-eme. N'agbanyeghị nwere obere nha ma e jiri ya tụnyere kọntinent ndị ọzọ dịka America ma ọ bụ Eshia, ya ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme na-eme ka Europe bụrụ otu n’ime kọntinent kachasị mkpa ma na-atọ ụtọ.
E nwere ọtụtụ isi eziokwu na ihe ọmụma banyere Europe. Fọdụ n'ime data a nwere ike iyi nke ọma, mana ọtụtụ ndị ọzọ dị ịtụnanya. Ya mere, anyị ga-eme a chịkọtara ozi a sitere na Europe na pụrụ ịbụ na-akpali.
3 Ihe ọchị banyere Europe
4 Akụkọ banyere Europe
5 Gaa Europe
Na Europe enwere ngụkọta nke Ugbu a, asụsụ gọọmentị 24, ụfọdụ amaara nke ọma na ndị ọzọ abụghị nke ukwuu. Ndị a na-ejikarị eme ihe bụ Russian, Italian, English, German ma ọ bụ French. E nwekwara asụsụ gọọmentị ndị ọzọ amachaghị, dịka Turkish, Serbian, Romania, Polish ma ọ bụ Macedonian.
Na mgbakwunye na asụsụ ndị isi Europe ndị a, enwere ihe kariri asusu iri-isii na mpaghara nke ahụ nwere ike ịbụ onye isi na mba, dịka na Spain na Basque, Catalan na Galician. E nwekwara ndị ọzọ na Europe, dịka Frisian, Welsh, Sami ma ọ bụ Yiddish. Ndi obere obodo na-asụ ha, mana n'agbanyeghị ihe niile ha na-anwa ịchekwa ọgaranya asụsụ a.
Onye ukwu ọtụtụ asụsụ sitere na Indo-European, nke a kwenyere na ya na ibe ya sitere na mmalite ha, dị ka asụsụ Romance ndị sitere na asụsụ Latin, Germanic, Slavic ma ọ bụ Celtic. Agbanyeghị, e nwekwara ụfọdụ asụsụ ndị na-abụghị Indo-European, dịka Basque ma ọ bụ Arabic.
Ihe mbụ ịmara bụ na Europe abụghị mpaghara n'onwe ya n'onwe ya, mana a na-akpọ ya dị ka nke ahụ dabere na okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana ọbụghị mpaghara ala, n'ihi na ọ bụghị oke ala dị iche na Eshia. Ha abụọ mejupụtara uka a na-akpọ Eurasia. Ndị ọzọ kọntinent bụ n'ihi na ala ihe mere, dị ka Africa ma ọ bụ Oceania.
na oke nke europe a na-ahụ ha na North Cape na okpu pola n'ebe ugwu na Oke Osimiri Atlantic n'akụkụ ọdịda anyanwụ. N’ebe ndịda ya oke osimiri Mediterenian, Oké Osimiri Ojii na Caucasus. N’ebe ọwụwa anyanwụ ka Ural Ural na Osimiri Ural dị. A gbanwere ókèala ndị a ka akụkọ ntolite gbanwere.
El enyemaka nke kọntinent a abụghị ihe mgbagwoju anya, nke nwere nnukwu ala dị larịị na ụfọdụ ugwu, nke nwere ugwu ochie. N'ozuzu ya, ọ bụ nchikota ugwu na ugwu na-enye nnukwu ụlọ na ihu igwe dị iche iche.
Ihe ọchị banyere Europe
Europe bụ kọntinent nwere ọtụtụ akụkọ ntolite, yana ọtụtụ eziokwu dị omimi nke nwere ike ịmasị. N'ihe banyere nha, Russia bụ mba kachasị ukwuu na Vatican bụ nke pekarịrị, ebe ọ bụ na a na-ahụta ya obodo n’agbanyeghi na ọ dị n’ime oke Rome. Enwekwara micro-mba ndị ọzọ dịka Liechtenstein ma ọ bụ Andorra.
Europe bụ nke abụọ dị obere na ụwa, mgbe Oceania gasịrị. O nwere ihe dịka square kilomita 10,180.000 na ihe dị ka nde mmadụ 700 bi na ya, ọ bụ ezie na ọ bụ kọntinent nwere ntakịrị ọmụmụ nwa, ya mere ọnụ ọgụgụ mmadụ na-akawanye nká. Obodo ya kachasị ukwuu bụ Paris, ihe dị ka nde mmadụ 11.
A na-eme atụmatụ na nke abụọ Agha Worldwa nke nde 32 nwụrụ ndị bi na Europe, nke bụ 2,5% nke ndị bi n'ụwa ugbu a. N’akụkọ ihe mere eme ya, agha na mmeri ya, ihe dị ka mba 70 na-apụ n’anya na map ahụ, bụ́ nke gbanwere ọdịdị ya. Na mbu 80 rue 90% nke Europe bu oke ohia, mana ta ugbua 3% diri ndi Western Europe.
Aha a maka Europe sitere na adaeze Phoenicia oge ochie sitere n'akụkọ ifo ndị Greek. Ha na-ezo aka na ada nke Eze Taịa, nke nwere akụkọ banyere mgbatị ya, mgbe Zeus kpọgara ya na Krit.
Akụkọ banyere Europe
Europe dị ka kọntinent nwere ihe akaebe nke malitere na prehistory, ya na nwoke Neanderthal, onye amaala Europe, na Cro-Magnon, Homo Sapiens nke e si na ya nweta nwoke nke oge a. Akụkọ ihe mere eme nke kọntinent ahụ dị nnọọ mgbagwoju anya, na-agabiga ihe ndị dị mkpa dị ka oge nke Alaeze Ukwu Rom, ọdịda ya, Middle Ages, the Modern Age, nke kwesiri iru na narị afọ nke XNUMX, na oge ugbu a, ya na ụwa abụọ Agha na usoro iwu ikpeazụ nke European Union, nke anyị bi na ya ugbu a nke ka nwere ike ịgbanwe.
Usoro nke European Union malitere na 50s, mana emere iwu nke ya November 1 nke 1993, mgbe Nkwekọrịta nke European Union malitere ịdị ike. Ihe mejuputara ya bu obodo iri-abuo na iri ato na Europe, ma burukwa ihe n’eme ka ha tinye onu n’igwe. E nwekwara mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ nke EU, mana nke ha dịpụrụ adịpụ enweghị iwu na iwu ụfọdụ, dịka Azores, Madeira ma ọ bụ Canary Islands.
Ọ bụrụ na anyị ga-aga mba ọ bụla n'ime ndị otu 28 nke European Union, anyị ga-ama ụfọdụ nkọwa. Na ụmụ amaala nke European Union Ha nwere ike ịga njem na-enweghị NJ na-enweghị akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụrụ na ha gafere mba mpaghara mpaghara Schengen, nke bụ mpaghara na-enweghị oke maka ụmụ amaala. Ọ bụrụ na ị gaa Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Romania ma ọ bụ United Kingdom, ị ga-ebu ezigbo ID ma ọ bụ paspọtụ, ebe ọ bụ na ha esiteghị na mpaghara na-enweghị oke.
para ndị na-abụghị obodo Ga-achọ akwụkwọ ikike ngafe ruru ọnwa atọ ka ụbọchị ịpụsịrị njem si mba European Union pụta, nke ewepụtara na opekata mpe afọ iri gara aga. Ikwesiri igba mbọ hụ na ịchọghị visa. Enwere mba ụfọdụ anaghị achọ ya n'ihi nkwekọrịta mba ụwa, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu chọrọ ya, yabụ ị ga-enyocha ihe ndị ị chọrọ iji njem, ebe ọ bụ na ngwa gị na-ewe oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Ebe njegharị » Eziokwu na Ozi banyere Europe
Rio de Janeiro (Brazil): ụzọ mgbapụ na agwaetiti Tropical a ma ama